गणतान्त्रिक बनोस् ओली सरकार – Chitwan Post
गणतान्त्रिक बनोस् ओली सरकार
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेष्ठ १६, २०७६
नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको आज १२ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्ष र जनताकै आकांक्षाअनुरुप २४० वर्षे निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै ०६५ जेठ १५ गते जननिर्वाचित संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । सरकारले धुमधामका साथ गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा जनतामा कुनै प्रकारको उत्साह जागेको छैन । जनताको शासन र जनताकै अभिमतमा आधारित उच्चतम लोकतान्त्रिक प्रणाली रहेको गणतन्त्र अहिले सत्तामा रहेका शासकहरुबाटै खतरामा रहेको आरोप चौतर्फीरुपमा उठेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र प्राप्तिको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै गर्दा गणतन्त्रका उपलब्धिहरुको रक्षा हुन सकिरहेको छैन । ओली सरकारको करिब डेढ वर्षको शासनकाल जनतामा आशा, भरोसा र उत्साह जागृत गर्नुभन्दा सत्तामा रहेर जनताको स्वतन्त्रता हरण गर्ने काममा उद्यत भएको छ । गणतान्त्रिक भनिएको सरकारले अहिले राजतन्त्रको भद्दा नक्कल गरिरहेको छ । विडम्बना यो छ कि यो गणतन्त्र आज आमनेपालीको दिवस बन्न सकेको छैन । जसका लागि र जे उद्देश्यका लागि सहिदले आफ्नो जीवन बलिदानी दिएका थिए त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।
सरकार जनपक्षीय, देशभक्त र प्रगतिशील रहेको दाबी गरिरहँदा जनतामा सुशासन, शान्ति सुरक्षा र विकासको अनुभूति हुन सकेको छैन । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएर मह¤वाकांक्षी सपना बाँडिरहेको तीन तहका सरकारबीच लय र ताल मिल्न सकेको छैन । जनताको जीवनमा लोकतन्त्रको सार्थक अनुभूति गराउने अभियानमा सरकारले भूमिका खेल्न सकेको छैन । गरिबीको दर झनै बढेर गएको छ । भ्रष्टाचारमा कीर्तिमानी कायम भएको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कार, अपहरण तथा लुटपाटका घटना बढोत्तरी भएका छन् । नेपालका करिब ४३ लाखको हाराहारीमा युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । प्रतिवर्ष पाँच लाख श्रमशक्ति विदेशिन बाध्य छन् । मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा धेरै युवा विदेशिने गरेका छन् । उनीहरुबाटै आर्जित रेमिट्यान्स नै बजेटको ठूलो हिस्सा बन्ने गरेको छ । अझै ६० लाख मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । यो कुल जनसंख्याको झन्डै २२ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले सबै वर्ग, पेसा, क्षेत्र, व्यवसायप्रति सम्मान र संवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै गर्दा देशको चौँथो अङ्ग मानिने पत्रकारको घाँटी अँठ्याउने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेर देशभरका पत्रकारलाई आन्दोलित तुल्याएको छ ।
जनताको शासन भनिने गणतन्त्रमा राजतन्त्रको भद्दा सिको गर्दै सरकारका कमीकमजोरी र गलत कामको विरोध गर्नेहरुलाई तह लगाउन सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन लागेको घामझैँ छर्लङ्ग भइसकेको छ । मानवअधिकार आयोगको अधिकार संकुचित गरेर र पत्रकारलाई घाँटी निमोठेर सरकारले कसरी स्वतन्त्र प्रेस र मानवअधिकारको सम्मान गर्छ ? विरोधका स्वर कत्ति पनि सुन्न नसक्ने र आलोचनालाई आत्मसात् गर्न नसक्ने ओली सरकारले एकपछि अर्को सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयत्न गरेको छ । ओली सरकारलाई इतिहासकै अनुकूल वातावरण सिर्जना हुँदा जनता चिढाउने काम गर्नुहुँदैन । पत्रकारहरुले सरकारलाई बाधा–अवरोध होइन रचनात्मक आलोचना गर्छन्, सरकारको गलत कामकारबाहीलाई खबरदारी गर्छन् र सरकारको सकारात्मक अभियानमा सारथि बनेर सघाउँछन् । सामन्ती व्यवस्था फालेका जनताले गणतान्त्रिक सरकारको शासकीय शैली र व्यवहार महाराज, महारानीको जस्तो नहोस् भन्नेमात्रै चाहेका हुन् । तसर्थ, जनताले भाषणमा होइन व्यवहारमै गणतन्त्र र जनताको शासन चाहेका छन्, ओली सरकारले प्रगतिशील परम्पराको सुरूवात गर्नु आवश्यक छ ।
महत्व : लोकतन्त्रको कि गणतन्त्रको ?
‘सानो घर’मा बालिकाहरुसँग सामूहिक भोजन